I-Twittter yenziwe njani? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
I-Twittter yenziwe njani?
Meyi 11, 2021 0 IiCententarios 324
I-Twitter yeyona nethiwekhi iphambili yokubambisa ngoku ikhoyo ngoku. Ukusukela ekudalweni kwayo ngo-2006, iqokelele ngaphezulu kwe-380 yezigidi zabasebenzisi ukuza kuthi ga ngoku. Okwangoku, le nethiwekhi ifikelela kumazwe angaphezu kwekhulu kwaye ineelwimi ezingama-40.
Isekwe kwinkqubo yokushicilela emfutshane ebizwa ngokuba yi-Tweet. Apho kubhalwe khona abalinganiswa abangama-280 kunye nemifanekiso, iividiyo, isicatshulwa, ii-URLs kunye nee-GIF kunokwabelwana ngazo. Ngokunjalo isebenza phantsi kwenkqubo yabalandeli kwaye ilandelwe.
Yintoni umsebenzi we-Twitter?
Ngokwenkampani enye, eyona njongo yayo iphambili yile "Nika wonke umntu amandla okuvelisa nokwabelana ngezimvo kunye nolwazi kwangoko nangaphandle kwemiqobo." Ke ihlala iyile kwaye iphucule ujongano lwayo ukunika abasebenzisi amava ngaphandle kwezithintelo zonxibelelwano.
Uthathe amanyathelo akhe okuqala noJack Dorsey, uNowa Glass Biz Stone kunye noEvan Williams E-San Francisco, California, United States, ngaphakathi kwenkampani ye-Odeo. Ekuqaleni, ii-microblogging zazisetyenziswa ngabasebenzi benkampani. Abayili bokuqala yayinguEvan WIlliams kunye noBiz Stone ngentsebenziswano yabanye.
Iqale ukusebenza ngoJulayi 15, 2006. I-Tweet yokuqala yenziwa nguDorsey ngo-12: 50 emva kwemini wathi "ukuseta nje i-twtrr yam", into efana no "ukulungisa i-twtrr yam" ngeSpanish. Kunyaka kamva, i-Twitter yayifumana ukufaneleka, isaziwa kakhulu, ikwazile ukuphumelela "uMzantsi ngeMbasa yeWebhu yoMzantsi-ntshona" kwinqanaba lebhlog.
Ukuthiya eli nethiwekhi yayingumsebenzi wokunyuka. Kuqala kwathiwa yiSimo, kamva satshintshelwa kwiTwtrr, njenge "peep yeentaka". Ngapha koko, abenzi bayo bagqiba kwelokuba baphucule igama lesibini ngokudibanisa ezinye izikhamiso, yiyo loo nto kwathiwa igama linguTwitter. Ngokwabo, inguqulelo yakhe ihambelana "nokugqabhuka okufutshane kolwazi olungabalulekanga."
Inkampani yaqhubeka ikhula
Ngexesha lokudalwa kwe-Twitter, abadali bayo bazala i-Obvious Corporation kwaye bathenga iOdeo. Kodwa emva kwexesha elithile, ngo-2007, i-Twitter yahlukana nale yokugqibela yaba yinkampani ezimeleyo phantsi kobongameli bukaJack Dorsey ngo-2008.
Ngo-2009 inkampani inyuke iphindaphinda abasebenzi bayo, Ukufumana ukufaneleka komhlaba wonke. Kwakulo nyaka mnye, inkonzo yentengiso kuTwitter yaqala ukusebenza kwaye ekupheleni kwalo nyaka, yabonelela ngemisebenzi ngeelwimi ezininzi; IsiSpanish, isiFrentshi, isiTaliyane nesiJamani.
Kunyaka kamva, inkampani idala "iiTweets ezikhuthaziweyo" njengendlela entsha yenkonzo yayo yentengiso. Emva kwexesha oku kuya kuguqulwa kube "ziintengiso ze-Twitter", emva koko wenze "i-Twitter Analytics", ngenjongo yokulinganisa ukusebenza kweakhawunti yomsebenzisi kunye neeakhawunti ngeenjongo zorhwebo.
Ngo-2015, iTwitter yenze “iPeriscope” ukuze abasebenzisi bayo bakwazi ukwenza usasazo ngqo, kwaye ngaloo nyaka kwasasazwa izigidi ezingama-200. Kule minyaka ilandelayo, inkampani iqhubekile nokukhula, apho abezopolitiko, oorhulumente, abantu abadumileyo, iimbaleki, amajelo kamabonwakude eneakhawunti nezigidi zabalandeli.
1 Yintoni umsebenzi we-Twitter?
2 Amanyathelo okuqala
3 Igama "Twitter."
4 Inkampani yaqhubeka ikhula
Uyiphucula njani ukusebenza kwe-SEO kwiPinterest?
Ungayicima njani iNkulumbuso ye-YouTube?